Ubuchwepheshe amafemu nimelane Trans-Pacific Partnership - Izindaba Rule
Ubuchwepheshe amafemu nimelane Trans-Pacific Partnership
INTERNET umbhikisho GROUP Fight for the Future (FFTF) uye babanjwa 29 information technology amafemu ukuba ngisayine incwadi omelana ngokuqinile ukudlula Trans-Pacific Partnership (TPP) yohwebo samazwe onke.
I TPP uyilungiselelo ukuthi uthanda izifiso izinkampani ezinkulu zamazwe ngamazwe eziphethe ngalutho enye. Nakuba ngobubanzi osekelwa ezinye izimboni kanye uhulumeni US, libuye libe izimbangi zayo.
29 nabaphikisi, kuhlanganise DuckDuckGo, Boingboing, Fark, iFixit futhi Reddit baye basekela yabo mkhankaso FFTF ngokumelene sivumelwano TPP ngethabo wasayina isigijimi ukuphikiswa.
Izimpikiswano ngobukhulu ohlongozwayo ukuhweba sivumelwano iziphakamiso zayo ukuze iphatheke copyright, ubumfihlo kanye namalungelo obunikazi, kanye neqiniso lokuthi liye kwaxoxiswana ngasese cishe Imininingwane.
Le ncwadi ubuza US Senator Ron Wyden ukungavumeli amaqembu isithunzi ukuze zilawule imithetho internet, futhi uxwayisa ngokuthi ekusekeleni TPP kwakuyobe kumelene iinrhuluphelo zomphakathi.
“Singasho kuphela ukwakha uhlaka lwenqubomgomo innovation yimpumelelo – lowo isekela imibono emisha, imikhiqizo, kanye nezimakethe – uma inqubo ukuklama ivuliwe futhi iqhaza. Ngeshwa, inqubo ukuhweba izingxoxo bekulokhu lutho kodwa okubonakalayo. umkhakha Wethu, futhi abasebenzisi esizisebenzisayo, kudingeka ube etafuleni kusukela ekuqaleni kuze kube ukuklama izinqubomgomo bakhonze ezingaphezu kuka izithakazelo emincane commercial of the izinkampani ezimbalwa ezinkulu abaye angiphendule,” wabhala izinkampani.
“Sinxusa yini ukuba sidlule iyiphi inguqulo ye Track Fast noma ukuhweba ukukhuthazwa igunya, noma ukuvumela noma yiziphi indlela ukuthi kwakuyoba lula ukudlula izivumelwano zohwebo equkethe digital copyright yokuphoqelelwa kokukhokhwa kwesikweleti amalungiselelo yakhelwe opaque, Inqubo evaliwe ngendlu.”
Bagcina incwadi ethi u-Senator Wyden, njengosihlalo we- Senate ikomiti lezimali US, osesimweni ukugcina US iyahola emisha. m
Lesi sihloko, Ubuchwepheshe amafemu nimelane Trans-Pacific Partnership, is yedlanzana kusukela obuzayo futhi posted lapha nge imvume.
20036	2 fast Track, iFixit, Ron Wyden, TPP, Trans-Pacific Partnership, Trans-Pacific Partnership Strategic Economic, I-united states, United States Senate Committee on Finance
← Amarobhothi ngokubhala izindaba Guinea scrambles ukuba lithwale ezibulalayo Ebola →